CEEBEEY TACAAL: Macallinka xulka Argentina ee Jorge Sampaoli oo falfalxumo la yaab leh lagu eedaynayo! | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha CEEBEEY TACAAL: Macallinka xulka Argentina ee Jorge Sampaoli oo falfalxumo la yaab...
CEEBEEY TACAAL: Macallinka xulka Argentina ee Jorge Sampaoli oo falfalxumo la yaab leh lagu eedaynayo!
(Buenos Aires) 10 Juun 2018 – War dhowr maalmood la isla dhexmarayay ayaa haatan dibedda usoo baxay, kaasoo sida uu sheegay weriyaha idaacadda maxalliga ah ee Radio Miter ee Gabriel Anello ku saabsan eedayn loo jeedinayo tababaraha Argentina ee Jorge Sampaoli oo galaangal jinsi ula tegey haweenay raashinka ka karisa xarunta xiriirka kubadda cagta dalkaasi.
Arrintan ayaa dhacday xilli ay xulka dalkaasi ee Albiceleste u xaraysan yihiin isu diyaarinta KA2018 oo Khamiista ka furmaya Ruushka, weriye Anello ayaa intaa ku daraya in gabadhan lagu cadaadiyay inaysan arrintan sheegin gaar ahaan xilli uu soo dhow yahay Koobka Adduunku.
Wuxuuna intaa raaciyay inay arrintani sii qarxi karto maalmaha soo aaddan, balse ay wax kastaahi ku xirnaan doonaan jidka ay raacdo gabadha dhibanaha ah, sida inay warbaahinta ama booliiska u gudbiso arrinta ama iskaba xirto gebi ahaanba.
Previous articleDEG DEG: Kim Jong-un oo kasoo degey Singapore + Sawirro
Next articleUS soldier killed in Somalia